5D/ 4N HO CHI MINH – PHAN THIET MUINE BEACH & SAND DUNES – DA LAT FLOWER | Explore Global Travel
5D/ 4N HO CHI MINH – PHAN THIET MUINE BEACH & SAND DUNES – DA LAT FLOWER
DAY 1 : ရန်ကုန် – ဟိုချီမင်(- / – / D)
(VietJet Airline VJ 832 RGN-SGN 13:00 – 15:45)
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့ ရှိ Tan San Nat အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် Asia Tour Vietnam ၏ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ထို့နောက် လူကြီးမင်းတို့ကို လေဆိပ်မှ ဟော်တယ်သို့ အပြန်လမ်းတွင် အချိန်ပေါ် မူတည်ပြီးမြို့ တွင်လည် ပတ်မှု ကို ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ ။ (ပြင်သစ်လက်ယာ မြောက်အဆောက် အဦးဖြစ့်သည့် Notre Dame Cathedral ၊စာတိုက်ကြီး ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက်သာ Reunification Palace ပို့ဆောင် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် Saigon Cruise ပေါ်တွင် တေးဂီတဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုများနှင့်အတူ ညစာစားသုံးရင်း တစ်နာရီခန့် Saigon မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်လည်ပတ်ကာ မြို့ပြရဲ့ညအလှကို ခံစားရင်း ဟိုချီမင်း မြို့ဟော်တယ်တွင် တစ်ညတာအိပ်စက်နားခိုမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ ။
(BenTen ညဈေးလည်ပတ်ချင်သူများအနေဖြင့် ည ၇နာရီမှ ၁၁:၃၀ အထိ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာ ပြီး ဗီယက်နမ် ထုတ်အ၀တ် အထည်များ နာမည်ကြီးကော်ဖီ အိတ်မျိုးစုံး ဗီယက်နမ်ထုတ် shoes လှလှလေးများ အစားအသောက်များကို ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ညဈေးတွင် ဈေးစစ်ရန်မမေ့ပါနှင့်)
DAY 2: ဟိုချီမင် – မိုနဲကမ်းခြေ (B, L, D)
မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် မိုနဲကမ်းခြေသို့ ၅ နာရီခန့် (220km ~ 5hours drive). မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခရီးဆက်မည် ဖြစ်ပါသည် ခင်များ ။ မိုနဲကမ်းခြေ တွင်နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် မိုနဲ့ကမ်းခြေ ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ Mui Ne sightseeing: + Red sand dunes and White sand dunes(သဲ ဖြူ နှင့် သဲနီ တောင်ကုန်းများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရန် အကောင်းဆုံနေရာများဖြစ်ပါသည်။ သဲဖြူ တောင်တွင် (မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဂျစ်ကားများ ငှားရမ်းကာ သဲတောင်ကုန်များကို လည်ပတ်စီးနင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ဂျစ်တစ်စီးလျှင် ၆ယောက် ခန့်စီးနိုင်ပြီး တစ်ယောက်လျှင် ၅ဒေါ်လာခန့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်စီးဂျစ်များအတွက် ဗီယက်နမ်ဒေါင် ၆သိန်း (ဒေါ်လာ၃၀ ၀န်းကျင်ခန့်) ကုန်ကျနိင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ) ထို့နောက် Grand Caanyon အသေးစားလေးလို တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ Fairy Stream သို့သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး စမ်းချောင်းငယ်တစ်လျှောက် လမ်လျှောက်ကာ အမှတ်တရဓါတ်ပုံများ ရိုက်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ထို့နောက် ညစာစားသုံးပြီးနောက် မိုနဲကမ်းခြေတွင် တစ်ညတာအိပ်စက်နားခိုမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ။
+ Fairy Stream –alittle river that winds its way through bamboo forests, boulders and the dunes behind the village, in parts resemblingaminiature version of the Grand Canyon
Day3မိုနဲကမ်းခြေ မှ ဒါလက်တောင်ပေါ်မြို့ သို့ (B, L, D)
မနက်စာသုံးဆောင်ပြီ:နောက် အေးချမ်းသာယာလှပတဲ့ ဒါလက်တောင်ပေါ်မြို့လေးသို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခရီးဆက်မှာ ဖြစ်ပါ သည် ခင်များ ။ လမ်းခရီးတစ်လျှောက် ၃နာရီခွဲခန့် (150km ~ 3,5hours drive)မောင်းနှင်ရပြီး တောင်တက်လမ်းမှာ အကွေ့အကောက်နဲ့မို့ ကားမူတတ်သူများနေဖြင့် ရှူဆေးဘူး နဲ့ အနွေ:ထည်လေးဆောင်ခဲ့ဖို့ အကြံပြုပါရစေခင်များ ။ ဒါလက်မြို့ တွင် နေ့လည်စာ သုံးဆောင် ပြီးနောက် ဒါလက်မြို့၏ အထင်ကရနေများကိုစတင်လည်ပတ်မှာဖြစ် ပါတယ်ခင်များ ။
(၁) visit Truc Lam Monastery (the largest one nationwide) သုိ့ Robin တောင်ကိုဖြတ်ကာ ကေဘယ်ကားဖြင့် ဒါလက်မြို့ ကို အပေါ်စီးက လွမ်းခြုံပြီး မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။
(၂) Dalat City’s flower garden ပန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ပန်းဥယာဉ်သို့သွားရောက်လည်ပတ် မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ
(၃) Valley of Love or Crazy House
(Valley of Love) အချစ်ရွာလေးလို့ တင်စာထိုက်အောင် ပန်းပေါင်းစုံနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ထိုနေရာလေးဟာလည် လာရောက်လည်ပတ်သူ များကို ဆွဲဆောင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ
Crazy House (နာမည်နှင့် လိုက်အောင် ဖန်တီးထားသော ဗိသုကာလက်ယာများနှင့် သူမတူတဲ့ ဒီဇိုင်ကြောင့် Crazy House ဟုခေါ်ပြီး Hang Nga အမျိုးသမီး ကတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် Hang Nga Guesthouse ဟုလည်းခေါ်သည်။ )ထိုနေရာ လေးကိုတော့ သွားဖို့အကြံပြုလိုက်ပါရစေခင်များ ။
Old Train Station (ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သော ဘူတာရုံဟောင်းဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်လက်ယာ အဆောက်အဦးနှင့်အတူ ရှေးယခင်က အသုံးပြုခဲ့သော ရထားများကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ)
Le Domain De Marie Church
Visit the most beautiful and biggest lake in Da Lat – Xuan Huong Lake
(ဒါလက်မြို့ရဲ့ အသဲနှလုံးလို့တင်စားလို့ရတဲ့ ဒီကန်ကြီးဟာ မြို့အလယ်တွင်တည်ရှိပြီး အရမ်းကိုသာယာလှပတဲ့ နေရာလေးမို့ ညနေခင်နေ၀င်ချိန်ဟာ သွားရောက်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးအချိန်လေးပါ)
ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဒါလက်ညဈေးကို သွားရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ညဈေးဟာမြို့လယ်တွင်တည်ရှိပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာ သောကြောင့် ခရီးသွားတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့်နေရာလေးမို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။ဒါလက်မြို့ဟော်တယ်တွင် ညအိပ်တည်းခိုမည် ဖြစ်ပါသည် ခင်များ။(ဒါလက်မြို့တွင် ကော်ဖီ ၀ိုင် အ၀တ်အထည်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာ့စွာရရှိနိုင်ပါတယ် ခင်များ )
Day4: ဒါလက် မှ ဟိုချီမင်း (B, L, D)
မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Dantanla ရေတံခွန်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ရေတံခွန်သို့ သွားရာလမ်းတွင် Apline Coaster စီးရင်း ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စရာအတွေ့အကြုံသစ်ကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ။ ထို့နောက် ဟိုချီမင်မြို့သို့ ၈နာရီခန့် ခရီးဆက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အပြန်လမ်းတွင် နေ့လည်စာစားသုံးရင်း ကော်ဖီသောက်ရင်း ဈေးဝယ်နိုင်မယ် နေရာတွေမှာလည်း ရပ်နားသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ။ ညစာကိုဟိုချီမင်မြို့တွင် သုံးဆောင်ပြီး ဟိုချီမင်မြို့တွင် ညအိပ်တည်းခိုမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ ။ (ကျန်ရှိနေသေးသော အချိန်များကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ)
Day5: ဟိုချီမင် – ရန်ကုန် (B) .
VietNam Airline VN 943 SGN – RGN 08:40 – 10:20/ VietJet Airline VJ 832
မနက်စာစားသုံးပြီးနောက် Tan San Nat အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ။
Previous7D/ 6N HCM – DANANG- HOIAN HUE– HA NOI– HA LONG (AT HOTEL)
NextPHNOMPENH – SIEM REAP – TONLE SAP LAKE – SIHANOUK VILLE – KOH RONG ISLAND5DAYS4NIGHTS